ဖိနပ်ထုတ်လုပ်သူ ပို. ပို. ဖက်ရှင်စက်မှုလုပ်ငန်းနှင့်အတူစုဆုံနေကြသည်။ တစ်ဦးဖိနပ်ရွေးချယ်တဲ့အခါအဓိကငြင်းခုံမတိုင်မီ အကယ်. ဖော်ရွေနှင့်သင်လုပ်နေတာသောအားကစားခဲ့ပေမယ့်ယခုဝယ်လက်တိုးအသွင်အပြင်နှင့်အမှတ်တံဆိပ်များ၏ဂုဏ်သိက္ခာမှာရှာကြ၏။ မရအံ့သြစရာကောင်းလောက်အောင်, ဖိနပ်များ၏ထုတ်လုပ်မှုအတွက်ခေါင်းဆောင်မှုအားကစားဖိနပ်များ၏အရည်အသွေး, အလှအပနှင့်လက်တွေ့ဟန်ချက်မျှအောင်ပြုလုပ်ပေးစီမံခန့်ခွဲကြောင်းအမှတ်တံဆိပ်စောင့်ရှောက်လော့။ အားကစားများအတွက်ကုမ္ပဏီကြီးများထုတ်လုပ်ကမ္ဘာ့ဖိနပ်တစ်ခုမှာနှင့်အဝတ်ကုမ္ပဏီ Nike ကဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာကြှနျုပျတို့သညျဤဆောင်းပါး၌ဆွေးနွေးရန်အမျိုးသမီးဖက်ရှင် Sneaker အကြောင်းကို Nike ကဖြစ်ပါတယ်။
အမျိုးသမီးအားကစားဖိနပ် Nike က
Nike က - လူအပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံးအမှတ်တံဆိပ်အားကစားကုန်ပစ္စည်းများဖြစ်ပါတယ်။ ဒါဟာဖိနပ်ထုတ်လုပ်သူများလွှမ်းမိုးသောအများစုအားကစားများအတွက်အထူးဖိနပ်ကြောင်းထို့ကြောင့်အံ့သြစရာတော့မဟုတ်ပါဘူး။ အဆိုပါအမှတ်တံဆိပ်ကွဲပြားခြားနားသောအားကစားနှင့်အလုပ်အကိုင်အခွင့်၏ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများအဘို့ဒီဇိုင်းဖိနပ်အတော်ကြာလိုင်းများကမ်းလှမ်း - နှစ်ဦးစလုံးမိုးလုံလေလုံနှင့်ပြင်ပလေ့ကျင့်ရေးဘို့။
ယနေ့အထိအလွန်လူကြိုက်များအမျိုးသမီးပြေးဖိနပ် Nike ကရွရွပြေး။ သူတို့ရဲ့ထုတ်လုပ်မှုများအတွက်ရွရွပြေးဘို့အမျိုးသမီး Nike ကပြေးဖိနပ်စံပြစေနိုင်သည်ကိုအများဆုံးခေတ်သစ်ပစ္စည်းများနှင့်နည်းပညာများကို အသုံးပြု. ။ သူတို့ကခြေထောကျပံ့ပေး, ခြေဆစ်နဲ့ဒူးပေါ်မှာ load ညီ, ထိခိုက်မှုအန္တရာယ်ကိုလျှော့ချရန်နှင့်, အဆုံး၌, ပဲမှုဆွဲဆောင်မှုဒီဇိုင်းရန်သင့်စိတ်ဓါတ်များနှင့်လေ့ကျင့်ပေးဖို့ဆန္ဒမြှင့်။
Nike ကအဆိုပါအပြေးဖိနပ် (အမျိုးသမီးနှင့်အမျိုးသားနှစ်ဦးစလုံး) ကိုနိုင်ငံတကာအရည်အသွေးနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံမှုစံချိန်စံညွှန်းများနှင့်ကိုက်ညီကြောင်းသေချာ။ ဤသည်ဝန်ပြေးဖိနပ်၏မှန်ကန်စွာအရွယ်နှင့်အမျိုးအစားကိုသင်စနစ်တကျထိုသူတို့အဘို့ဂရုစိုက်လိမ့်မည်သင်တန်းပေး, နှစ်ပေါင်းများစွာဘို့သင့်ကိုကြာရှည်မည်ဟုဆိုလိုသည်။ အားကစားဖိနပ်အဘို့အဂရုစိုက်တတ်တဲ့သိပ်ပင်ပန်းတယ်မဟုတ် - အရှိဆုံးမော်ဒယ်များစက်အဝတ်လျှော်များအတွက်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်။
ပလက်ဖောင်းအပေါ် Nike ကအမျိုးသမီးအပြေးဖိနပ်
သို့သော် Nike ကအမျိုးသမီးများအတွက်မဟုတ်မှသာအားကစားများအတွက်ဖိနပ်ကို - အသစ်တခုစုစည်းပြုလုပ်ခြင်းသည်ပုံရိပ်တွေဖန်တီးစတိုင်မော်ဒယ်အမျိုးမျိုးပါဝင်သည်။
ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်, 2013 ခုနှစ်ဖိနပ် running နေ့စဉ်အမျိုးသမီးများ၏ဖိနပ်၏လူကြိုက်အများဆုံးမော်ဒယ် Nike ကမြင့်မားတဲ့ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပလက်ဖောင်းပေါ်တွင် option ကို။ ထိုအဖြတ်နှင့်ဒီဇိုင်း၏သဘောသဘာဝကြောင့်သူတို့အားနှင့်အခြားသူများအားကစားများအတွက်သင့်လျော်သောမဟုတျပါ, ဒါပေမယ့်တစ်ဦးကိုဖန်တီးရန်ခေတ်မီဖက်ရှင်ကမျက်နှာသာပေးကြသည် စတိုင်လေးကို အားကစား chic ၏ဒြပ်စင်နှင့်အတူ။ အရောင်များ«အရောင်လုပ်ကွက်» (တော်တော်များများခြားနားသောအရောင်အဆင်းများပေါင်းစပ်) လက်ရှိသင်အဝတ်အများဆုံးကွဲပြားခြားနားသောအရိပ်နှင့်အတူဖိနပ်ပေါင်းစပ်ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
နွေဦးကို 2014 ခုနှစ်မိတ်ကပ်စုဆောင်းမှု
ဖိနပ် - ဖက်ရှင် 2016
ရေကူးဝတ်စုံ Lise Charmel 2013
ကုလားကာ 2016 နှင့်အတူမင်္ဂလာဆောင်ဆံပင်
လက်သည်း 2016 အပေါ်ကိန်းဂဏန်းများ
နှုတ်ခမ်းနီ 2016 ၏ခေတ်မှီအရိပ်
ခေတ်မှီဆံပင်ပုံစံတွေ - နွေရာသီ 2015
သငျသညျကို "ဟယ်ရီပေါ်တာ" တွင်ကိုယ်တိုင်မြင်ကြပြီဖြစ်သော 'Thrones ၏ဂိမ်း "မှ7သရုပ်ဆောင်တွေ,
အင်္ကျီ Fall-ဆောင်းရာသီ 2014-2015
ဂျယ်လ်လက်သည်း 2014 ၏ဒီဇိုင်း
Rihanna နဲ့မစ်စီ Elliott သည်တစ်ဦးပျောက်ဆုံးနေလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ရှာနေကြသည်
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးဘဝ Adriana Ugarte
ဖန်ခွက်ရေချိုးခန်းနဲ့လုပ်ထားတဲ့ရေချိုးခန်း partitions ကို
အစားအသောက် Berries ပါ